အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန်အတွက် တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - 113 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 113 အိမ်ခြံမြေများ
Virtual 3D tours of အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အိမ်ခြံမြေများ
Suggested Offer7သိန်း/လ
1 1 638 စတုရန်းပေ
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at 1 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 638 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Star C...
12638 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 638 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in St...
3 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon
321,262 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,262 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
3 Bedroom Condo for rent in Pabedan, Yangon
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for rent in Pabedan, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,500 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
3 Bedroom Condo for rent in Pyay Garden Condominium, Yangon
321,300 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for rent in Pyay Garden Condominium, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,300 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် South Okkalapa, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for r...
3 Bedroom Condo for rent in Shwe Hintha Luxury Condominiums, Yangon
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for rent in Shwe Hintha Luxury Condominiums, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,350 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
Don't miss out! Get notified when new အိမ်ခြံမြေများ are listed တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 622 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Star C...
2 Bedroom Condo for rent in CRYSTAL RESIDENCES, Yangon
221,400 စတုရန်းပေ
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at2Bedroom Condo for rent in CRYSTAL RESIDENCES, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,400 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent...
321,185 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,185 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
332,100 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,100 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
Suggested Offer 8 သိန်း/လ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,300 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,200 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
3 Bedroom Condo for rent in River View, Yangon
331,872 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for rent in River View, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,872 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
2 Bedroom Condo for rent in The Gems Garden Condominium, Yangon
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at2Bedroom Condo for rent in The Gems Garden Condominium, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 900 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent i...
3 Bedroom Condo for rent in Grand Sayar San Condominium, Yangon
3320,451 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for rent in Grand Sayar San Condominium, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 20,451 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for ren...
3 Bedroom Apartment for rent in Thingangyun, Yangon
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Apartment for rent in Thingangyun, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,000 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သာကေတ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Apartment for rent...
231,350 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,350 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom C...
Make an offer directly to the owner ofaအိမ်ခြံမြေ တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်
Suggested Offer 11 သိန်း/လ
3 Bedroom Condo for rent in Golden Royal Sayarsan Condo, Yangon
321,466 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for rent in Golden Royal Sayarsan Condo, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,466 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
321,980 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,980 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
1 1 695 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 695 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Star C...
331,650 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,650 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
321,620 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,620 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
1 - 30 ၏ 113 အဖြေများ
သင့်အတွက် 69 အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရမ်းခြင်း :4သိန်း - 99 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း :5သိန်း - 144 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း :6သိန်း - 69 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း :9သိန်း - 72 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း :9သိန်း - 59 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း : 39 သိန်း - 51 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း : 14 သိန်း - 16 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း :6သိန်း - 18 သိန်း
အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တွင် ငှားရမ်းနိုင်သော အိမ်များအတွက် လစဉ်ငှားရမ်းခ အလယ်အလတ်သည် 19 သိန်း ဖြစ်သည်။ The median monthly rent per square feet in အရှေ့ပိုင်းခရိုင် is0သိန်း ယခုလက်ရှိတွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တွင် 113 အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန် ရရှိနိုင်သည်။
အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစား လစဉ် ပျမ်းမျှငှားရမ်းခ 1 အိပ်ခန်း (18 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 13 သိန်း2အိပ်ခန်းများ (28 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 22 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (46 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 24 သိန်း4အိပ်ခန်းများ (14 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 42 သိန်း7အိပ်ခန်းများ (5 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 59 သိန်း
အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တွင် အိမ်နီးချင်းများ
69 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော